Fanasarahana an’i Mitia sy Fitia : Reharehan’ny mpitsabo malagasy -
AccueilRaharaham-pirenenaFanasarahana an’i Mitia sy Fitia : Reharehan’ny mpitsabo malagasy
Fanasarahana an’i Mitia sy Fitia : Reharehan’ny mpitsabo malagasy
19/09/2017 admintriatra Raharaham-pirenena 0
Sambany. Fanintelony no nandraisan’ny mpitsabo mpandidy fandidiana zaza kambana miraikitra. Saingy, voalaza fa tamin’ny fanasarahana ilay zaza kambana mirahavavy, Mitia sy Fitia, no somary sarotra, ny 13 septambra teo. Na izany aza anefa, tontosa soa aman-tsara ny fandidiana fanasarahana azy mirahavavy ireto.
Nohazavain’ireo mpitsabo mpandidy zazakely etsy amin’ny Hopitaly HJRA, notarihin’ny Pr Mamy Lalatiana Andriamanarivo, minisitry ny Fahasalamana, fa tsy zaza kambana toa ny efa fahita teto Madagasikara ity nosarahana ity satria nitambatra ny atin’izy roa vavy ireo, izay tena nanahirana ny nanatanteraka ny fandidiana fanasarahana. Ekipa maromaro no nanatanteraka ny fandidiana, nanomboka tany amin’ny fizahana ny fahasalaman’ireo zaza kambana, ny fikarakarana, ny fanomanana ny fandidiana, ny fandidiana ary hatrany amin’ny fameloman’aina. Voalaza hatrany fa salama ary velona soa aman-tsara ireo zaza ireo amin’izao fotoana izao taorian’ny fanasarahana azy ireo, ny 13 septambra teo.
Nambaran’ny Pr Mamy Lalatiana Andriamanarivo fa reharehan’ny mpitsabo sy ny mpandidy malagasy ny fahatanterahan’ny fandidiana fanasaharana tsy nisy tomika ireto zaza kambana ireto. Raha naharitra 3 ora ny nandidiana ilay zaza kambana malagasy, Mahagaga sy Mahalatsa, tany Paris, Frantsa, ora 2 sy 30 mn kosa no nanatanterahan’ireo ekipa mpandidy niara-nisalahy tamin’ny fanasarahana an’i Mitia sy Fitia, tetsy amin’ny Hopitaly HJRA.
Raha ny mikasika ireto zaza kambana ireto, ny 10 avrily 2017 izy roa vavy no teraka, izay tamin’ny alalan’ny fandidiana ihany. Ny 2 mey teo kosa izy ireo no nampidirina teny amin’ny Hopitaly HJRA, ary rehefa nahazo ny lanja notratrarina (13 kg) izy ireo vao niroso tamin’ny fandidiana ireo mpitsabo malagasy.
Nandray an-tanana ny Fitondrana
Ankoatra izay, nambaran’ny Pr Mamy Lalatiana Andriamanarivo fa noho ny ezaky ny Fitondram-panjakana sy ny minisiteran’ny Fahasalamana no nahavitana antsakany sy andavany ny fandidiana fanasarahana ireo kambana mirahavavy ireo. “Tsy mikely soroka ny Fitondram-panjakana eo amin’ny tontolon’ny fahasalamam-bahoaka. Maro ireo ezaka nataon’ny Fitondrana amin’ny fanatsarana hatrany ireo fitaovam-pitsaboana, sns”, hoy ny minisitry ny Fahasalamana.
Raha ny fanazavana hatrany, anisan’ny ezaky nataon’ny Fitondram-panjakana ny fampitaovana ny hopitaly, indrindra fa ny fanaraham-penitry ny Hopitaly HJRA izay efa saika fitaovana maoderina avokoa no ampiasain’ireo mpitsabo mpandidy zazakely. “Efa vita eto Madagasikara avokoa ny fandidiana zazakely afa-tsy ny fandidiana fo ihany, izay mitaky fitaovana manokana ihany koa. Ny tsy fananantsika io fitaovana io no mbola tsy ahavitantsika manatanteraka izany eo amin’ny zazakely”, hoy hatrany ny Pr Mamy Lalatiana Andriamanarivo. Nambarany hatrany, fa mbola mitohy hatrany ny ezaka ataon’ny Fitondram-panjakana amin’ny fijerena manokana ny fahasalamam-bahoaka.
Voalaza fa mbola tsy mivoaka ny hopitaly kosa ireo zaza kambana ireo satria mbola arahi-maso akaiky ny toe-pahasalamany. Tsy azo vangiana ihany koa, ary efa natokana efitrano mihitsy ho fitandroana ny fahasalaman’izy ireo.
Niezaka ihany fa tsy afaka. Araka ny efa fantatra, nampiantso ireo taxi eto an-dRenivohitra ny teo anivon’ny Kaominina Antananarivo Renivohitra (CUA), ny sabotsy 23 septambra teo. Nizara ireo fanasana amin’ny fihaonana eo amin’ny taxi sy ...Tohiny